Izindaba - IBrocade Group yethule iChina-Central kanye ne-Eastern Europe Economic and Trade Cloud Fair neChengdu Special Cloud Fair
Ngo-Okthoba 28, uChengdu wabamba ngempumelelo i-China-Central ne-Eastern Europe Economic and Trade Cloud Fair neChengdu Special Cloud Fair. Lo mcimbi uyingxenye ebalulekile ye-2020 China-Europe International Trade Digital Exhibition. U-Liu Xiaoliu, Iphini leMeya kaHulumeni Wabantu bakaMasipala waseChengdu kanye nabaholi abahlobene nabo, Abaholi kanye nethimba loMkhandlu waseChina Wokukhuthaza Ukuhweba Kwamazwe Omhlaba, inxusa lethimba le-EU eChina, abamele amabhizinisi omnotho wasedijithali eChengdu iBrocade Artificial Intelligence Group ne-Aotai Abezokwelapha bahambele umcimbi wokuvula lo mbukiso. Ukubanjwa kwalo mbukiso kukhombise ubungqabavu bokusebenzisana kwezomnotho kanye nezohwebo phakathi kweChengdu neYurophu esikhathini sangemva kobhadane, futhi kuphinde kwafaka umfutho omusha wokubambisana okujulile phakathi kweChengdu neYurophu.
UDkt. Guo Sha, usihlalo we-Brocade Artificial Intelligence Group, UNks. Hao Fang, umongameli kanye nethimba le-elektroniki elisizayo kwezohwebo elibambe iqhaza kulo mhlangano, futhi ngaphambi komhlangano, babambe iqhaza emhlanganweni nabaholi benhlangano Uhulumeni kaMasipala waseChengdu, i-United Nations International Trade Center, iminyango kahulumeni waseChina nowaseMpumalanga neMpumalanga Yurophu, izinhlangano zamabhizinisi kanye nabamele ibhizinisi babe nokuhwebelana okunobungani.
U-Chen Jian'an, usekela sihlalo we China Council for the Promotion of International Trade, ubehambele umcimbi wokuvula futhi wethula inkulumo ngevidiyo. Enkulumweni yakhe, u-Chen Jianan uzwakalise ukubonga okusuka enhliziyweni emayunithi afanelekile oMkhandlu wase-China Wokugqugquzela Ukuhwebelana Kwamazwe Omhlaba kanye ne-China Chamber of International Commerce ngokusekelwa kwabo okunamandla nokubamba iqhaza. Umbukiso ububanjelwe ukukhumbula iminyaka engama-45 kwasungulwa ubudlelwano bokuxhumana phakathi kweChina ne-EU kanye nokugqugquzela ukuthuthukiswa kwamazwe aseChengdu naseCentral naseMpumalanga Yurophu.
U-Liu Xiaoliu, Iphini leMeya kaHulumeni Wabantu bakaMasipala waseChengdu, wethule ukuthuthukiswa okusheshayo kweChengdu kuzivakashi zaseChina nakwamanye amazwe ngobuqotho kulo mbukiso. Uthe uChengdu wumnotho obalulekile kazwelonke, ezobuchwepheshe, ezezimali, ezamasiko nezobuciko, ezokuhwebelana namanye amazwe kanye nokuhlanganiswa kwamazwe omhlaba okukhonjwe nguMkhandlu Wombuso. Isikhungo esimaphakathi, nepaki nesikhulumi njengophetheyo, sethula amaphrojekthi okutshala imali anjengomnotho wedijithali, imfundo ye-STEAM, isisekelo sokuhlola sesayensi nobuchwepheshe, ezokuvakasha kwamasiko nobuchwepheshe obuphezulu. UChengdu uthemba ngobuqotho ukuthi osomabhizinisi abavela kuwo wonke umhlaba bazobheka ngentshiseko amathuba okubambisana noChengdu emkhakheni wezokukhiqiza okuhle, amandla aluhlaza, imishini yezokwelapha, ukudala amasiko edijithali, kanye nokusebenza kwangaphandle, futhi bafune ukuthuthukiswa kwamabhizinisi okujwayelekile kanye nenqubekela phambili yasemadolobheni.
Ngemuva kwalokho, iNxusa le-European Union eChina, u-Yu Bai, uthe i-China seyedlule i-United States ukuze ibe ngumlingani omkhulu kwezokuhweba we-European Union okokuqala kusukela ngo-2020. I-China kanye ne-Central kanye ne-Eastern Europe amazwe anezindawo zawo izinzuzo, ukuhambisana okuqinile kanye namathemba abanzi wokubambisana. Umbukiso Wamafu Wezomnotho kanye Nezohwebo wase-China-Central kanye naseMpumalanga Yurophu, ovunyelwe nguMkhandlu Wezwe futhi wahlelwa nguMkhandlu Wokukhuthaza Ukuhweba Kwamazwe Ngamazwe, uthole ukunakwa okukhulu nokuhlonishwa osomabhizinisi bamazwe omhlaba. Njengomlingani omkhulu kaChengdu kwezohwebo, iYurophu inethemba lokuthi izinkampani ezivela ezinhlangothini zombili zizosebenzisa ithuba "lokusebenzisana okungu-17 + 1" ukuzuza ngokugcwele amandla emakethe enkulu ye- "Belt and Road". Dala indawo yezomnotho nezohwebo yamazwe omhlaba, ujoyine umcimbi omkhulu futhi ufune ukubambisana.
Ngasikhathi sinye, i-2020 China Europe International Trade Digital Exhibition nayo iqale ngosuku olufanayo. Izinkampani zaseChina eziyi-1,200 kanye nezivakashi eziyizi-12,000 zochwepheshe ezivela eYurophu zizobamba iqhaza kulo mbukiso online. Izinkampani ezingama-60 zakwaChengdu ezivela emkhakheni wezokukhiqiza okuhlakaniphile, amandla aluhlaza, ezamasiko nezobuciko zedijithali, imishini yezokwelapha, ukuhanjiswa kwempahla, njll. Zivele endaweni yesikhulumi sombukiso sedijithali soMkhandlu waseChina Wokukhuthaza Ukuhweba Kwamazwe Omhlaba. IBrocade Group iphinde ikhonjiswe kulo mbukiso wefu ngokusebenzisa imfundo ye-STEAM smart, imikhiqizo ye-elekthronikhi ephezulu yomsindo neyevidiyo, izindawo zedijithali neminye imikhakha. Engxoxweni, uDkt. Guo Sha uthe ukubamba iqhaza kweBrocade Group kulo mbukiso kuhloswe ngakho ukukhuthaza ukuthuthukiswa komnotho waseChengdu wedijithali kanye nokusebenzisana kwebhizinisi lokuthumela imikhiqizo yomkhiqizo ngogesi.
Enkulumweni yakhe, uLu Yiji, usihlalo we-Digital Association, uthe umnotho wedijithali ungene kancane kancane ekutshalweni nasekuhwebeni. I-China imakethe enkulu kunazo zonke emhlabeni ngokuya ngevolumu yezohwebo, efinyelela ku-US $ 600 million engxenyeni yokuqala yalo nyaka, idlula iMelika, i-United Kingdom, iJapane namanye amazwe. Izingxoxo eziku-inthanethi Ukuhweba, ukuyothenga, nokusakaza bukhoma ku-inthanethi sekuyizindlela ezithandwayo. Ubuchwepheshe beDijithali buletha uguquko embonini futhi bukhuthaze izinhlobo ezintsha zokuhweba. Kuyisikhali futhi kuzoba umkhuba wakusasa ozozuzisa abantu bomhlaba.
Umbukiso ububanjelwe yiChina Council for the Promotion of International Trade kanye noHulumeni Wabantu bakaMasipala waseChengdu, futhi wabanjwa yiChina Chamber of International Commerce, China Council for the Promotion of International Trade (China Chamber of International The promotion of trade and investment) eYurophu kufinyelele ezingeni elisha.
Isikhathi Iposi: Dec-21-2020